Kukwikwidza Kugadzira Welding Machine Vagadziri, Vatengesi - China Kukodzera Kuumba Welding Machine Fekitori
Kunyorera uye Feature Inokodzera yekugadzira gokora, tee, muchinjikwa uye Y chimiro (45 ° uye 60 °) zvigadzirwa zve PE, PP, PVDF mumusangano. ► Inoshandiswa zvakare kurebesa jekiseni rakaumbwa kukodzera uye kuita yakasanganiswa kukodzera. ► Chimiro chakabatanidzwa. Hapana chinosara kunze kwekusarudza akasiyana akasarudzika akasungisa paunenge uchigadzira akasiyana fittings. ► Inobviswa PTFE yakavharwa kupisa ndiro. Electricing planing chishandiso pamwe nekuchengetedza muganho switch. ► Yakaderera yekutanga kumanikidza uye yakakwirira yakavimbika chisimbiso chimiro. ► Separate tw ...
Workshop zvakakodzera Welding Machine-1200
Kunyorera uye Feature Inokodzera yekugadzira gokora, tee, muchinjikwa uye Y chimiro (45 ° uye 60 °) fittings ye PE, PP, PVDF mumusangano. ► Inoshandiswa zvakare kurebesa jekiseni rakaumbwa kukodzera uye kuita yakasanganiswa kukodzera. ► Chimiro chakabatanidzwa. Hapana chinosara kunze kwekusarudza akasiyana akasarudzika akasungisa paunenge uchigadzira akasiyana fittings. ► Inobviswa PTFE yakavharwa kupisa ndiro. Electricing planing chishandiso pamwe nekuchengetedza muganho switch. ► Yakaderera yekutanga kumanikidza uye yakakwirira yakavimbika chisimbiso chimiro. ► Kuparadzanisa ...
Musangano Fitting Welding Machine-315
Kunyorera uye Feature Inokodzera yekugadzira gokora, tee, muchinjikwa uye Y chimiro (45 ° uye 60 °) zvigadzirwa zve PE, PP, PVDF mumusangano. ► Inoshandiswa zvakare kurebesa jekiseni rakaumbwa kukodzera uye kuita yakasanganiswa kukodzera. ► Chimiro chakabatanidzwa. Hapana chinosara kunze kwekusarudza akasiyana akasarudzika akasungisa paunenge uchigadzira akasiyana fittings. ► Inobviswa PTFE yakavharwa kupisa ndiro. Electricing planing chishandiso pamwe nekuchengetedza muganho switch. ► Yakaderera yekutanga kumanikidza uye yakakwirira yakavimbika chisimbiso chimiro. ► Kuparadzanisa t ...
Chigaro Fusion Machine-SDM1200
Kunyorera uye Feature Inokodzera kugadzira PE kudzikisira tee mumusangano. ► Yakabatanidzwa basa rekutsvaira uye taping inogonesa kupedzisa iyo yese yekugadzira maitiro. ► Inobviswa PTFE yakaputirwa kupisa muforoma. ► Patsanura maviri-chiteshi timer marekodhi nguva mukukanya uye kutonhora zvikamu ► Dhijitari yakakwira-chaiyo kumanikidza mita inoratidza kuverengwa kwakajeka. Linear gwara nzira dzakashongedzwa ne kudziyisa ndiro uye kudhonza ndiro. ► PLC inodzora inowanikwa otomatiki maitiro kuverengera yakakwira kutenderera st ...
Chigaro Fusion Machine-SDM630
Chigaro Fusion Machine-SDM315